Ogow 5 nooc oo Nucleotide ah
Sidee Noocyo badan oo Nucleotid ku Jiraan?
DNA, waxaa jira afar nucleotide: adenine, thymine, guanine, iyo cytosine. Uracil wuxuu beddelayaa thymine RNA. Andrey Prokhorov / Getty Images
Waxaa jira 5 nukleotide oo badanaa loo isticmaalo biochemistry iyo genetics. Nucleotide kasta waa polymer ka kooban saddex qaybood:
Shan sonkor sonkor ah (2'-deoxyribose DNA ama ribose RNA)
Qaybo fosfaati ah
A nitrogenous (nitrogen-ku jira) saldhig
Shanta saldhig waa adenine, guanine, cytosine, thymine, iyo uracil, kuwaas oo leh calaamadaha A, G, C, T, iyo U, siday u kala horreeyaan. Magacyada saldhigyada waxaa guud ahaan loo isticmaalaa magacyada nucleotide, inkastoo tani ay tahay farsamo ahaan khaldan. Saldhigyadu waxay isku daraan sonkorta si ay u sameeyaan adenosin nucleotide, guanosin, cytaine, thymidine, iyo urin.
Nucleotides waxaa lagu magacaabaa iyadoo lagu saleynayo tirada fosfatada ay ku jiraan. Tusaale ahaan, nukleotide oo leh saldhig adenine ah iyo sadex fosfad oo haraaga ah ayaa loo magacaabi doonaa adenosine triphosphate (ATP). Haddii nukleotide uu leeyahay laba phosphate, waxay noqon lahayd adenosine diphosphate (ADP). Haddii ay jirto hal phosphate, nucleotide waa adenosine monophosphate (AMP).
In ka badan 5 ka mid ah Nucleotide
Inkastoo dadka intooda badani ay bartaan 5 nooc oo waaweyn oo nucleotide ah, waxaa jira dad kale. Tusaale ahaan, waxaa jira nucleotide cyclic (tusaale ahaan, 3'-5'cyclic GMP iyo isbeddel AMP). Saldhigyada ayaa sidoo kale laga yaabaa in lagu methylated si loo sameeyo molecules kala duwan.
Sii wad akhri akhbaar ku saabsan sida qaybaha nucleotide ku xiran yihiin, saldhigyada ay yihiin nadiifin iyo pyrimidines, iyo si dhow u eeg mid kasta oo ka mid ah 5 saldhig.
Sida qaybaha Nucleotide ku xiran yihiin
Qaybaha nukleotide waa nukleoside iyo hal ama dhowr fosafat ah. wikipedia.org
Labada DNA iyo RNA labadaba waxay isticmaalaan 4 xarun, laakiin ma isticmaalaan kuwa saxda ah. DNA waxay isticmaashaa adenine, thymine, guanine, iyo cytosine. RNA waxay isticmaashaa adenine, guanine, iyo cytosine, laakiin waxay leedahay uracil halkii thymine. Sumada molekulamarku waxay sameysmeysaa marka laba xarumood oo dhammeystiran ay sameeyaan cirbadaha hydrogen oo midba midka kale. Adenine waxay ku xidhan tahay thymine (AT) DNA iyo qashin-qubka RNA (AU). Guanin iyo cytosine ayaa isku dhafan (GC).
Si loo sameeyo nukleotide , salka ayaa isku xira kiniiniga koowaad ama koowaad ee ribose ama deoxyribose. Nambarka 5aad ee sonkorta ee sonkorta wuxuu isku xiraa oksijiin ee kooxda fosfate . Maaddooyinka DNA-da ama RNA, fosfate ka mid ah hal nukleotide waxay sameeyaan isku-xirka fosfoodiitir leh lambarka 3 ee kaarboon sonkorta nukleotide.
Maaddooyinka loo yaqaan "Adenine molecule", halkaa oo jajabkoodu jajab yahay carbon, cadadu waa hydrogen, iyo buluug yihiin nitrogen. LAGUNA DESIGN / Sawirada Getty
Saldhigyadu waxay qaataan mid ka mid ah laba nooc. Noocyada waxay ka kooban yihiin giraan baranimo ah, taas oo 5 garaam oo atom ah ay ku xidhan tahay garaac 6-atom ah. Pyrimidines waa halbeegyada hal-lixaad ah.
Nadiifinta waa adenine iyo guanine. Pyrimidines waa cytosin, thymine, iyo uracil.
Qaacida kiimikada ee adenine waa C 5 H 5 N 5. Adenine (A) waxay ku xidhan tahay thymine (T) ama uracil (U). Waa saldhig muhiim ah sababtoo ah waxa loo isticmaalaa maaha oo kaliya DNA iyo RNA, laakiin sidoo kale loogu talagalay mashiinka tamarta ee ATP, cofactor flavin adenine dinucleotide, iyo nicotinamide adenine dincucleotide (NAD).
Adenine vs Adenosine
Xusuusnow, inkastoo dadku u muuqdaan in ay tilmaamayaan nukleotides by magacyada saldhigooda, adenine iyo adenosine ma aha wax la mid ah! Adenine waa magaca saldhiga nadiifka ah. Adenosine waa unugyada weyn ee nukleotide ka sameysan ee adenine, ribose ama deoxyribose, iyo hal ama dhowr ka mid ah kooxaha fosfateed.
Maaddooyinka Thymine, oo ah halka ay jajabkoodu ku yaryahay carbon, caddaanku waa hydrogen, casaanku waa oksijiin, buluuguna waa nitrogen. LAGUNA DESIGN / Sawirada Getty
Caanaha kiimikada ee kiimikada pyrimidine thymine waa C 5 H 6 N 2 O 2 . Calaamaddiisu waa T oo waxa laga helaa DNA laakiin maaha RNA.
Mucaaradka Guanine, halkaa oo jajabyada jajabku ka dhigan yihiin kaarboonka, cadadu waa hydrogen, casaanku waa oksijiin, buluuguna waa nitrogen. MOLEKUUL / SCIENCE QORAALKA KA HORTAGIDA / Sawirada Goals
Qaaciddada kiimikada ah ee guineine purine waa C 5 H 5 N 5 O. Guanine (G) waxay ku xidhan tahay cytosine (C). Waxay sidaas ku samaysaa labada DNA iyo RNA.
Maaddada kiimikada, Cytosine molecule, halka jajabkoodu jajab yahay carbon, cadadu waa hydrogen, casaanku waa oksijiin, buluuguna waa nitrogen. LAGUNA DESIGN / Sawirada Getty
Caanaha kiimikada ee kiimikada ee pyrimidine cytosine waa C 4 H 5 N 3 O. calaamaddiisu waa C. Caddadkaas waxaa laga helaa DNA iyo RNA labadaba. Cytidine triphosphate (CTP) waa cirbaaxa enzyme kaasoo beddeli kara ADP ilaa ATP.
Cytosine waxay isbeddel u noqon kartaa uracil. Haddii isbadelka aan la dayactirin, tani waxay ka tagi kartaa haraaga kaadida ee DNA.
Maaddooyinka Uracil, halka jajabkoodu jajab yahay carbon, caddaanku waa hydrogen, casaanku waa oksijiin, buluuguna waa nitrogen. LAGUNA DESIGN / Sawirada Getty
Uracil waa asal daciif ah oo leh qaacida kiimikada C 4 H 4 N 2 O 2 . Uracil (U) waxaa laga helaa RNA, halkaasoo ay ku xirantahay adenine (A). Uracil waa qaabka demetated ee thymine salka. Qalabka molecule wuxuu isu rogaa dib u soo celinta dareen-celin fosfooriltransferase ah.
Mid ka mid ah xaqiiqada xiisaha leh ee uracil waa in hawlgalka Cassini ee Saturn uu ogaaday in dayax-gacmeedka Titan-ka u muuqdo in uu dusha sare ku jiro.
Immisa Atom Ayaa Ku Jira Jirka Aadam?
Dhiigga Hippos Swing?
Waa maxay qaabka ugu badan ee RNA?
Sida loo kala qaado DNA
Xaqiiqooyinka Nucleic Acid
Magaca 3 Monosaccharides
Sayniska wuxuu sharaxayaa sababta aad u lumisay culeyska biyaha
Miyuu Blood Blood Human Dhiig ku Tahay?
10 Tusalooyinka Carbohydrateska
10 RNA Xaqiiqooyinka
Qeexitaanka Chlorophyll iyo Doorka sawirka
Astaamaha Aasiyada Aasaasiga ah iyo Doorarkooda Caafimaad wanaagsan
SIDA LACAGEEDA LACAGTA IYO MACLUUMAADKA MACLUUMAADKA LACAGEED
Turos, Lubnaan: Sawirada & Sawirrada
Saacadaha SpongeBob: Dib-u-eegid Dib-u-eegista Waalidiinta
Adeegyada Sannadka Sannadlaha ah ee Dheer
Xaqiiqooyinka Sayniska Sayniska iyo Trivia
Muxuu Ilaah Lahaa Magacyo badan?
Dib u eegis: Batman / Superman # 30 (2016)
Top 5 Caddaan oo bilaash ah Swami Vivekananda
Taariikhda Maraykanku: Farshaxanka Norman Rockwell
10 Argagixisada Diidmada: Fikradaha iyo Fikradaha Diidmada Diidmada
Sheekooyin cajiib ah leh malaa'igo
Waa maxay Farqiga u dhexeeya Dhuxusha iyo Alumuuniyamka Tubaakada?
Guudmarka Juquraafi Goboleedka
Taariikhda gaaban ee ganacsiga addoonta Afrika
Taariikhda Qalabka Habboonada
10 Tilmaamo loogu talagalay Daahfashinta si aad u hesho natiijooyin xirfadeed
Faransiiska kaftanka iyo funny Quotes ku saabsan Faransiiska
Noocyada iyo Meeleynta Faransiiska Faraxumo
22 sababood oo ah in aan ka mid ah Estados Unidos por inadmisibilidad
Qeexidda iyo Wadahadalka Naxwaha Comparative
Isbaarooyinka Stag, Family Lucanidae
Sida Loogu Fiiriyo "Éviter" (si looga fogaado)